Umkhuleko kuSanta Muerte ngomsebenzi. ? Isebenza emahoreni angama-24!
Umkhuleko kuSanta Muerte ngomsebenzi Inamandla amakhulu.
Kusebenza kakhulu uma ufuna umsebenzi kube sengathi okudingayo ukuxazulula inkinga ethile eyethulwa endaweni yokusebenza kwakho.
Amandla amabi esiwazwayo, kwesinye isikhathi, emsebenzini wethu amabi futhi angathinta esisebenza nabo, abaphathi kanye nathi ngqo noma ngokungaqondile.
1 Umkhuleko kuSanta Muerte ngomsebenzi
1.1 Ingabe ukufa okungcwele kunamandla?
1.2 Ingabe kuyingozi ukusho lo mthandazo?
1.3 Ngingawuqala nini umthandazo wokucela ukufa okungcwele ukuze ngisebenze?
Sithandwa sami esithandekayo nesibusisiwe sokufa, ngiyakuncenga ngala mazwi ngoba ngidinga usizo lwakho.
Emsebenzini ngizithola ngihlangabezana nezinkinga ezingenza ngingabaze ubuciko bami.
Bengihlaselwe yizinkozi ezidlayo nezinomona ezifuna ukungibona ngiphansi.
Ngibhekene nesikhathi esibi engifuna ukusiguqula, ngidinga umsebenzi lapho kungekho khona umona, lapho amakhono ami aqashelwa futhi angabonakala ukuthi abe ngcono. Ukunikeza umndeni wami induduzo abayidingayo.
Ngiyakucela ukuthi ugcine umsebenzi wami, futhi uma kungenzeki. Ngisize ngithole okungcono. Ngicela usuku okufanele ngiye kwi-interview.
Ngifuna ukufeza izinhloso zami zobungcweti ukuze ngizizwe ngigcwele.
Ngifuna umsebenzi ongcono, iholo elingcono, ukuthi umgomo wami wobuchwepheshe awunamkhawulo.
Ngifuna ukugqama ukuba ngibe ngcono. Kungakho ngiza kuwe, ubuhle bakho namandla akho infinito ukuthi izinkinga zami ngiziyekela ezandleni zakho. Ngiyabonga, ngiyabonga ngokungapheli, ngiyikholwa lakho elithembekile.
Lesi sigwebo sisetshenziswa ngalezo zikhathi lapho siya kwinhlolokhono yomsebenzi, lapho sesizofaka isicelo somsebenzi ebesilokhu sifuna, ukubuza lokho kusisiza ukuthi sithole ukukhushulwa noma ukukhushulwa emholweni wethu, uma ubhekene nesikhathi esinzima emsebenzini nomlingani, umphathi, ikhasimende noma umsebenzi.
Nokho, lo mkhuleko uzokusiza konke okuphathelene nendawo yonke yokusebenza.
Ingabe ukufa okungcwele kunamandla?
Uhlonishwe kakhulu iminyaka eminingi, ikakhulukazi ngabantu baseMexico.
Amakholwa aya ngokuya ethe xaxa futhi lokhu kukhombisa kuphela amandla e-Holy ukufa.
Kukhona labo ababheka ukuthi ngumoya omubi kodwa lokhu akunazo ngokuphelele izisekelo lapho sibona izimangaliso nosizo olunikezwe yile Ngcwele kubo bonke abeza kuye bezofuna usizo nosizo.
Ingabe kuyingozi ukusho lo mthandazo?
Imikhuleko Kibo ngokwabo abayingozi.
Kodwa-ke, kuhle ukukwenza ngomthwalo wemfanelo ophelele ngoba ezikhathini eziningi sicela okuthile okungasilungeli, umngane noma isihlobo.
Imikhuleko iba yindaba ebucayi ngoba singena emaphesenti angamakhulu ayisishiyagalombili komhlaba lapho kufanele sazi ukuthi sihamba kanjani ngoba okungekuhle kuyabheda ekufuneni ababuthaka okholweni.
Ngingawuqala nini umthandazo wokucela ukufa okungcwele ukuze ngisebenze?
Nganoma yisiphi isikhathi, lo mkhuleko uba isikhali sethu esiyimfihlo ngaso sonke isikhathi noma ngabe sikuphi.
Abaningi baluleka ukuthi benze i-altare noma balungiselele imvelo yangaphambi kokuthandaza futhi lokhu kungasisiza ukuthi sigxile kulokho esikwenzayo.
Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uma singenakho lokhu okufanayo, umthandazo uyasebenza futhi unamandla ngoba kwenziwa ngokukholwa ukuthi yiyona kuphela imfuneko okufanele siyigcwalise ngendlela eyisibopho.
Umkhuleko onamandla futhi onamandla kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka
Imikhuleko emi-4 yokucela usizo eSanta Cyprian omkhulu